Wararka - Toddobaadkii Naqshadeynta ee Guangzhou iyo Carwadii Dhagaxa ee sannadkan, waxaan ku soo qaadannay maado heleysa culeys badan. Warshado badan ayaa ku faraxsan xiisaha dhagxaanta.
Waa maxay dhagax la shiiday? Waa dusha isafgarad aad u heer sare ah oo uu sameeyay nin sameeyay oo loogu talagalay adkeysiga. Waxay jirtay dhowr sano hadda, markaa haddii aadan horay ugu been abuurmin, waa laga yaabaa inaad dhaqso u soo dhowaato. Si kastaba ha noqotee, waxaad dooneysaa inaad barato sida loo gooyo dhagxaanta saxda ah sida saxda ah. Xirfadaha farsamada gacanta iyo qalabka saxda ah, waxaad wax badan ka heli doontaa maaddadan cajiibka ah.
Maxaa ka dhigaya dhagax la shiiday sida shey aad u weyn waa adkeysigiisa iyo kala duwanaansho. Dhagaxa jaranjarada waxaa loo isticmaalaa adeegsi degenaansho iyo ganacsi, gudaha iyo dibedda xitaa qalabka guriga. Waxayna ahayd muddo dheer oo ku filan in midabka iyo xulashada midabku ay aad u horumarsan yihiin. Dukaammada adduunka oo dhan waxay iibinayaan foornada dhagxaanta leh, iyo rakibidda miisaska dhagxaanta, sagxadaha, derbiyada, iyo qaabeynta qaab-dhismeedka bannaanka.
Waxyaabaha u gaarka ah dhagxaanta shiidan waxay ka dhigi kartaa mid ka mid ah dhagxaanta aan la cafiyi karin ee la jarayo.
Tusaale ahaan, slabyada qaar waxay leeyihiin qaab lagu daabacay dusha sare. Chips kasta ama cilladaha kuwan ku saabsan ayaa burburin kara muuqaalka ka dib dahaadhka caarada. Qalabka kale ee dhagxaanta leh sida Neolith oo leh nashqado ka dhex socda daaqada, wali waxaad dooneysaa inaad si toos ah u jajabiso si aad uga dhigto badeecadaada dhammaatay inay u ekaato sida ugu fiican.
Haddaad si sax ah u jarayso, tayada shaqadaada dhammaatay waxay noqon doontaa mid heer sare ah. Waxaad kuheli doontaa shaqada oo dhan walxaha jilicsan ee aad maamuli karto. Ku khaldo oo waxaad u badan tahay inaad sameyn doonto wax kasta oo ay qaadato si looga fogaado waxyaabaha ku saabsan shaqooyinka mustaqbalka.
Xitaa haddii aad haysato mashiinka goynta buundada ama aaladda wax lagu gooyo ee mindida biyaha lagu gooyo, laakiin xawaaraha goynta ayaa ah mid aad u gaabis ah, waxtar yar, yareeynta isticmaalka maaddada, sidaa darteed kharashka howshu aad ayuu u sarreeyaa.
Sida loo Gooyo Dhagxaanta Sintered dhaqso badan iyo qiimo jaban
Guusha maaddadan waa mid fudud: toosan iyo qaabaysan gooyn.
Nadiif ah toosan iyo googoyn qaabeeyawaa lagama maarmaan natiijooyinka dhamaadka-sare ee kuu keenaya tixraacyo. Si aad u hesho jeexitaankaas saxda ah waxaad u baahan tahay qalab sax ah. Haddii aad horey u haysatid mashiinka dhagxaanta dhagxaanta si otomaatig ah loo gooyay, waad dejisay. Haddii aadan markaa ka fiirsan inaad maal gashato mid. Mashiinka goynta dhagxaanta otomaatiga ah ee saxda ah iyo adkeysigiisu waa mid aan is dhigmin. Xawaaraha goynta waa ilaa 180 mitir daqiiqadii, Waxaan ku sameynay baaritaan balaaran mashiinkeena qalabka dhagxaanta leh. Waxaan kalsooni ku qabnaa inaad heli doonto isla natiijooyin aad u wanaagsan oo macaamiisheennu ay ka helayaan Shiinaha.